मोनाद्धारा बेनीका पहिरो पिडितलाई घर हस्तान्तरण – धौलागिरी खबर
मोनाद्धारा बेनीका पहिरो पिडितलाई घर हस्तान्तरण
धौलागिरी खबर	 २०७८ असार १६, बुधबार ०८:१५ गते मा प्रकाशित 278 0
बेनी । प्रवासी म्याग्देलीहरुले बेनी नगरपालिकामा गत वर्षको पहिरोबाट घरबास गुमाएकाहरुका लागि पुनःनिर्माण गरिदिएको आवास हस्तान्तरण गरेका छन् ।
म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) अन्तराष्ट्रिय कार्यसमितिले पुनःनिर्माण गरेका चार वटा घर नगरपालिका, प्रशासन कार्यालय र राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरुको उपस्थितिमा मंगलबार हस्तान्तरण गरेका हुन्
मोनाका अध्यक्ष ओमनारायण जुग्जालीले नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारी मार्फत लाभग्राहीलाई घरको डमी चाबी हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । बेनपा–६, चुत्रेनीका बाटुलीदेवी थापा, डम्बराका भीमबहादुर थापा र राहुवडाका पूर्णबहादुर विक तथा पात्लेखेतका धनदेवी नेपालीलाई नयाँ घरको चाबी हस्तान्तरण गरिएको हो ।
गत बर्खामा पहिरोका कारण बेनी नगरपालिकामा ५८ वटा सहित जिल्लाभर २४७ घर भत्किएका थिए । रोजगारी, अध्ययन, ब्यापार, ब्यवसायको शिलशिलामा विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका म्याग्देलीहरु आवद्ध मोनाले गत वर्खामा क्षति पुगेका म्याग्दीका ४० वटा घर पुननिर्माण गरेका छन् ।
मोनाको पहिरो पिडितको निजी आवास पुननिर्माण कार्यदलका सदस्य दल शेरपुञ्जाले प्रतिघर रु. पाँच लाखका दरले खर्चेर पालिका र जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा आवास पुननिर्माण गरेको बताउनुभयो ।
“बिदेशमा भएका म्याग्देलीहरुले चन्दा जुटाएर पहिरो पिडितको घर पुननिर्माण गरेका हौ,” उहाँले भन्नुभयो “अन्य पालिकामा निर्माण भएका घर पनि क्रमश हस्तान्तरण गर्दैछौ ।” बुधबार धवलागिरी गाउँपालिकाको मराङ र बिहिबार मालिकाको बिमका पहिरो पिडितको घर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ ।
पहिरो पिडितको आवास पुननिर्माणका लागि मोनाले रु. दुई करोड जुटाएको थियो । धवलागिरी गाउँपालिकामा १४, मालिकामा १०, मंगला, रघुगंगा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकामा ४÷४ वटा घर निर्माण गरेको छ ।
एक वटा भान्छाकोठा सहित तीन कोठे घर भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको हो । प्रवासी, स्थानीय प्रशासन र पालिकाहरुसँग घर पुननिर्माणका लागि म्याग्दीको परोपकारी संस्था ओमकुमारी शान्ति कोषले संयोजन गरेको छ । पहिरोबाट अति प्रभावित धवलागिरी गाउँपालिकाको मराङ र मालिका गाउँपालिकाको बिममा एकिकृत बस्तीको अवधारणा अनुसार निजी आवास पुननिर्माण भएको छ ।
मोनाले बनाएका बाहेकका घर पुननिर्माण गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराउन दश करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अनुदानमा बन्ने घर पुननिर्माणले पनि तिब्रता पाएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।